ONE Championship ပွဲမှာရှုံးသွား လို့ ငိုနေတဲ့ကလေးလေးကို ကတိတ စ်ခု ပေးခဲ့တဲ့ အောင်လအာန်ဆိုင်း – XB Media Myanmar
ပရိသတ်ကြီးရေ မကြာသေးမီက ကျင်းပခဲ့တဲ့ ONE Championship ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ဂုဏ်ဆောင် ဖြစ်တဲ့ အောင်လအာန်ဆိုင်းဟာ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတဲ့အတွက် မြန်မာ နိုင် ငံ က ပရိသတ်တွေ ဝမ်းနည်းခဲ့ကြရတာပါ ။ အောင်လအာန်ဆိုင်းရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အတွက် ဝမ်း နည်း မျက်ရည်ကျတဲ့ ပရိသတ်တွေတောင် ရှိခဲ့တာပါ ။ သူ့အတွက် မျက်ရည်ကျရတဲ့ ပရိသတ် တွေထဲမှာ ကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ် ။
အဲဒီကလေးလေး ငိုနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကြောင့် အောင်လအာန်ဆိုင်းက ကျွန်တော်နေကောင်း ကျ န်း မာပါတယ်၊ ကျွန်တော့်မိသားစုလည်းနေကောင်းကျန်းမာကြပါတယ်၊ ထို့အတူကျွန်တော့်အ သ င်းကလည်းကျွန်တော့်ကိုနောက်ကွယ်ကနေအကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
ဘုရားသခင်က ကောင်းမြတ်ပါတယ်! ကျွန်တော်အသန်မာဆုံး၊အကောင်းဆုံး ပုံစံနဲ့လေ့ကျင့် ပြင်ဆင် ပြန်လည်ရင် ဆိုင်ထိုးသတ်ပြီးတော့၊မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံ ခါးပတ်ကိုပြန်လည်အ ရယူမယ်လို့ ကတိပေးပါ တယ်။ ဒီတော့ငိုကြွေးမနေပါနဲ့တော့ ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက် နှာက နေတဆင့် အားပေးနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့တာပါ ။
သူ့အတွက် ခံစားနေရတဲ့ ပရိသတ်တွေကို တလေးတစား နဲ့ တောင်းပန်ပြီး နောက်ထပ် ချန်ပီယံ ခါးပတ်ကို ပြန်လည် အရယူမယ်လို့ ကတိပေးစကားဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ ပရိသတ်တွေကတော့ အောင်လအာန်ဆိုင်းက သူ့အတွက်အတွက်တော့ ထာဝရ ချန်ပီယံတစ်ယောက်ပါဆိုတဲ့ ကြည်နူး ဖွယ် မှတ်ချက်လေးတွေ ရေးသားထားကြပါတယ် ။
Source : Aung La N Seng
ပရိသတ္ႀကီးေရ မၾကာေသးမီက က်င္းပခဲ့တဲ့ ONE Championship ၿပိဳင္ပြဲႀ ကီးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ ဂုဏ္ေဆာင္ ျဖစ္တဲ့ ေအာင္လအာန္ဆိုင္းဟာ စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ရတဲ့အတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ ငံ က ပရိသတ္ေတြ ဝမ္းနည္းခဲ့ၾကရတာပါ ။ ေအာင္လအာန္ဆိုင္းရႈံးနိမ့္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဝမ္း နည္း မ်က္ရည္က်တဲ့ ပရိသတ္ေတြေ တာင္ ရွိခဲ့တာပါ ။ သူ႔အတြက္ မ်က္ရည္က်ရတဲ့ ပရိသတ္ ေတြထဲမွာ ကေလးငယ္ေလး တစ္ေယာက္လည္း ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္ ။
အဲဒီကေလးေလး ငိုေနတဲ့ ဗီဒီယိုေလးေၾကာင့္ ေအာင္လအာန္ဆိုင္းက ကြၽန္ေ တာ္ေ နေကာင္း က် န္း မာပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ့္မိသားစုလည္းေနေ ကာ င္း က်န္းမာၾကပါတယ္၊ ထို႔အတူကြၽန္ေတာ့္အ သ င္းကလည္းကြၽန္ေတာ့္ကိုေ နာက္ကြယ္ကေနအေကာင္းဆုံးေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။
ဘုရားသခင္က ေကာင္းျမတ္ပါတယ္! ကြၽန္ေတာ္အသန္မာဆုံး၊အေကာင္းဆုံး ပုံစံနဲ႔ေ လ့က်င့္ ျပင္ဆင္ ျပန္လည္ရင္ ဆိုင္ထိုးသတ္ၿပီးေတာ့၊မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္းခ်န္ပီယံ ခါးပတ္ကိုျပန္လည္အ ရယူမယ္လို႔ ကတိေပးပါ တယ္။ ဒီေတာ့ငိုေႂကြးမေနပါနဲ႔ေတာ့ ဆိုတဲ့စာသားေလး နဲ႔အတူ သူ႔ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ ႏွာက ေနတဆင့္ အားေပးႏွစ္သိမ့္ေ ပးခဲ့ တာပါ ။
သူ႔အတြက္ ခံစားေနရတဲ့ ပရိသတ္ေတြကို တေလးတစား နဲ႔ ေတာင္းပန္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ခ်န္ပီယံ ခါးပတ္ကို ျပန္လည္ အရယူမယ္လို႔ ကတိေပးစကားဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ ေအာင္လအာန္ဆိုင္းက သူ႔အတြက္အတြက္ေတာ့ ထာဝရ ခ်န္ပီယံ တစ္ေယာက္ပါဆိုတဲ့ ၾကည္ႏူး ဖြယ္ မွတ္ခ်က္ေလးေတြ ေရးသားထားၾက ပါ တယ္ ။
အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်ရတဲ့ သီ တင်းကျွတ်လပြည့်ညလေးမှာ အိမ် ရှေ့မှာပဲ သားလေးမြတ်သူနဲ့ ဆီမီးပူ ဇော်ခဲ့တဲ့ မြင့်မြတ်